Xildhibaan Daahir Amiin Jiisow oo ka hor yimid Go’aankii Afhayeenka Barlamaanka ee ahaa inay ka gaabsadaan warbaahinta – idalenews.com
Xildhibaan Daahir Amiin Jiisow oo ka hor yimid Go’aankii Afhayeenka Barlamaanka ee ahaa inay ka gaabsadaan warbaahinta
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow ayaa noqdey xildhibaanka kaliya ee ka tirsan golaha barlamaanka ee si joogta ah uga hadla idaacadaha maxaliga isagoo u jawaaba siyaasi kastaa oo uu u arko in dantiisa iyo dan beeshiisa ka soo jeedo. Masuuliyiinta dowlada ayaa horey ashtako uga gudbiyey xildhibaankaan sheegeyna inuu ku howlan yahay fashilinta qorshaha dowlada iyo warbixinada barlamaanka oo qaarkood saxaafada dibada ay ka joogaan.
Dhageyso Jawaabtii ugu dambeysey ee Xildhibaan bixiyey.
Waxaa jira xildhibaano kale oo sidoo kale afahayeen u noqdey howsha xukuumada oo mar kastaa idaacada gudaha iyo dibada teleefoono u diro, taasoo ay ka muuqato isbarbaryaac shaqada hay’adaha dowlada iyo weliba wadajirka dowlada Soomaaliya oo ay ka wada tirsan yihiin.
Gudoomiyaha baarlamaanka Somaliya Maxamed Sheikh Cusmaan (Jawaari) oo marar badan kula dar daaramayo xildhibaanada ka gaabsiga warbaahinta ay lahadlayaan. Sharafka Xildhibaankuna aysan u wanaagsaneyn in uu wax uu maqlo sheego ama ka hadlo.
Maxamed Sh.Cusmaan (Jawaari) ayaa sheegay in laga wanaagsan yahay xildhibaanada baarlamaanka inay idaacadaha ka hadlaan kuna tilmaamay mid heybadooda sharafeed hoos udhigeysa.
“Xildhibaanada yeysan la hadlin warbaahinta,waayo raadiye ka hadalka waxa uu keenaa inuu fashiliyo qorshayaal horyaala baarlamaanka oo habac galay ayuu yiri Jawaari”.
Waxa uu tibaaxay gudoomiyaha Baarlamaanka Somaliya inay dhowr jeer maqleen xildhibaano idaacadaha ka doodaya misana fashilinaya qodobo uqarsoonaa baarlamaanka Somalia.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Somaliya waxa uu sidoo kale sheegay in markii la maqlay habka wanaagsan uu ku shaqeeyo ay wafdi heer caalami ah ku imaan doonaan muqdisho iyagoo codsaday kulan baarlamaanka ah inay ka qeyb gali doonaan.
Professor jawaari ayaa mudanayaasha baarlamaanka ugu baaqay inay ka gaabsadaan ka hadalka Arimaha Kismaayo oo murankeeda ka taagan yahay islamarkaana xildhibaanada uga digay inay idaacadaha ka hadlaan.
Muqdisho oo ku dhawaad 30 warbaahin ka howlgalaana ayaa waxa ka hadla xildhibaano katirsan Baarlamaanka misana ka hadlaya hadba dhacdada siyaasadeed ee ka taagan Somalia.
Daawo Dhacdadaan ku dhacdey Somalida degan Zambia oo uu sababey nin Ganacsade Somali ah oo diley nin shaqaale u ahaa
Khudbad dheer oo Madaxweyne Xasan Sheekh u jeediyey Jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Kenya